Fursadaha Muusigga | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Fasallada 1-4: Ardaydu waxay ku raaxaystaan fasalka muusiga oo ay ka helaan macallin muusig ruqsad haysta. Muusikada Fasalka waxaa ka mid ah heesaha, garaacida qalabka, dhageysiga, dhaqdhaqaaqa iyo aqrinta muusikada. Casharada xargaha waxaa laga yaabaa inay bilaabaan fasalka afaraad.
Fasalka 5: Ardayda waxay dooran karaan in ay diiradda saaraan waxa iyaga lagu waaniyey music ee band , orchestra , choir ama music fasalka . Marka laga soo tago casharrada koox-dhaqameedka, ardayda u doorta inay ku takhasusaan waxay leeyihiin koox buuxda, orchestra ama waayo-aragnimo kooxeed oo leh fursado waxqabadyo badan sannadka oo dhan. Qaabkani wuxuu cadeeyay inuu dardar galinayo guulaha muusigga ee ka baxsan inta badan barnaamijyada miyuusigga ee heerka aasaasiga ah.
Dugsiyadeena dhexe waxay bixiyaan ikhtiyaarro xulasho si loo kordhiyo aqoonta ardayda iyo qadarinta farshaxanka wanaagsan. Iyada oo loo marayo waxqabad iyo soo bandhigid, fursado sii ballaaranaya sannad kasta, ardaydu waxay sahamin karaan oo ay ku daba-geli karaan hibooyinka mustaqbalka ee kooxda muusikada, kooxda muusiga, kooxda muusiga, fasalka / muusikada guud, riwaayadaha iyo farshaxanka istuudiyaha.
Ardayda doonaya inay garaacaan aalad iyo sidoo kale inay horumariyaan hibada codka waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay ku biiraan koox-kooxeedyada subaxdii iyadoo lagu darayo inay iska diiwaangeliyaan kooxda muusikada ama muusikada. Koorsooyin yar yar iyo shaqsiyeed ayaa la heli karaa si looga caawiyo ardayda inay ku fiicnaadaan muusikada codka iyo qalabka.
Band: Barnaamijkeenna muusiggu wuxuu ka kooban yahay shan qaybood oo riwaayad ah, laba jazz oo isu soo uruurinaya, koox muusiko garaacaysa, koox fanaaniin iyo koox socod ah. Kooxuhu waxay sameeyaan in kabadan 30 kulan oo bulshada sanadkiiba ah dhacdooyinka iyo tartamada. Kooxda Dabaysha iyo Symphonic Band ayaa u safray xafladaha muusikada ee Kaliforniya, Hawaii, Washington, DC, Austria, Norway iyo Shiinaha. Kooxdayada 'Jazz Band' ee guuleysatay waxaa laga soo dhejiyay raadiyaha jazz ee Minnesota, waxaa lagu soo bandhigay kooxda Dakota Jazz Club waxaana la siiyay casuumaadyo ay kula soo bandhigayaan kulleejooyin iyo fannaaniin xirfadlayaal ah.
Orchestra: Barnaamijkeenna muusigga ee abaalmarinta helay wuxuu leeyahay afar koox oo kooxeedyo lagu daray waxqabadyo manhaj dheeri ah. Waxaa naloo abaal mariyey Barnaamijkii Maamuuska ee Maamuusta ee gobolka Minnesota, kooxdeenna dugsiga sarena waxay ka qaybgalaan xafladaha muusikada ee waddanka oo dhan. Kooxaheena dugsiga sare waxay ku dalxiisteen xafladaha muusikada meelaha sida San Francisco, Los Angeles, Chicago, Orlando, iyo San Diego ee Mareykanka. Iskuduwahayada ugu sareeya wuxuu ku soo wareegay caalami ahaan meelo ay ka mid yihiin Jarmalka, Czech Republic, Austria iyo Puerto Rico. Sannadkii 2015, waxay ku soo wareegeen Beijing iyo Shanghai, Shiinaha, oo ay weheliyaan MHS Wind Ensemble. Sannadka 2017 waxay ku dalxiis tegi doonaan Spain iyada oo MHS Wind Ensemble ay qabaneyso dalxiis orkure ah oo buuxa. Kooxdayada manhajka isku-xidhka ah waxay si joogto ah u helaan qiimeyn heer sare ah waxaana badanaa loo arkaa waxqabadka Goobta ugu Fiican.
Choir: Isku imaatinka koox-kooxeed ee dugsiga sare waxaa ka mid ah shan kooxood, fannaaniin qolqol-joog ah, fannaaniinta madrigal fanaaniinta iyo Donna Voce. Sida kooxaha iyo kooxaha muusikada oo kale, kooxda hobollada sare waxay qabtaan oo ku tartamaan gudaha, qaran ahaan iyo caalami ahaanba. Laga soo bilaabo 2012, Kooxda Fanaaniinta Xidigaha ayaa booqday Ireland, New York, Chicago, Italy, Rome iyo London.
Akadeemiyada Muusikada ee Minnetonka
Akadamiyada Muusikada ee Minnetonka waa barnaamij kobcin ah oo laga bixiyo Minnetonka Community Education . Waxaa loo aqoonsan yahay majaladda Lake Minnetonka ee 2016 "Casharrada Muusikada ugu Fiican," Minnetonka Music Academy waxay bixisaa waxbarid gaar ah iyo kooxeed oo ku saabsan biyaano, gitaarka, qoryaha, naxaasta, xargaha, garaaca iyo codka jawiga raaxada leh ee carruurta iyo dadka waaweyn ee da 'kasta leh. Casharrada waxaa loo qorsheeyay toban goobood oo ku habboon oo ku yaal Degmada Dugsiga Dadweynaha Minnetonka.